Sanad Guuradii 26aad ee ka Soo Wareegatay Aas Aaskii Jwxo, oo ka Dhici Doona Sanadkan Gudaha iyo Dibada Dhulka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Sanad Guuradii 26aad ee ka Soo Wareegatay Aas Aaskii Jwxo, oo ka Dhici Doona Sanadkan Gudaha iyo Dibada Dhulka Somalida Ogadeeniya
Aug 9, 2010 ethiopia, Ogaden, ONLF, oo ka Dhici Doona Gudaha iyo Gudaha iyo Dibada dhulka Somalida Ogadeeniya., Sanad Guuradii 26aad ee ka Soo Wareegatay Aas Aaskii Jwxo, somalia
Nabada u dhaxaysa dawlada Itobiya iyo ururka ONLF, dartiis, waxaa sanadkan la filayaa in xuska sanad guurada 26aad ee ururka ONLF, uu ka dhicidoona magaalada Jijiga. Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo], ayaa waxaa la aas aasay August 15, 1984, waxaana lagu aas aasay magaalada Muqdisho. Xiligaas oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya quus ka istaageen dhaqdhaqaaqii halgan ee ay waday Jabhada Xoraynta Somali Galbeed [JXSG], oo iyagu xiligaas taladeedu ay gacanta u gashay dawladii Somaliya.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya ayaa waxaa aas aaskeeda lahaa rag u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya oo qaxootinimo ku joogay Somaliya oo ay ka mid ahaayeen, Ustaad Cabdiramaan Yuusuf Magan, Axmed Jaale, Sheekh Ibraahin Cabdala, Maxamed Siraad Dolaal, Abdi Ibrahin Geelle, Cabdulahi Mohamed Sacdi.
Jabhada Jwxo, oo afka qalaad lagu yidhaahdo [ONLF], ayaa sanooyinkii hore oo dhan waxaa ay ahayd mid uu magaceedu qarsoodi yahay. Kolkii dambase waxaa si tartiib-tartiib ah loogu soo bandhigayey dhalinyada ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa dhalinyarad la dareen siin jiray in dalka Somaliya uusan ahayn dalkoodii, balse ay marti ku yihiin maalin maalmaha ka mid ahna ay dib ugu laaban doonaan dalkooda. Dhalinyarada waxaa la dareensiin jiray in dalka Somalida Ogadeeniya uu ku jiro gumaysi loona baahan yahay in la xoreeyo.
Jabhada ONLF waxay xidhiidh dhaw la lahayd Jabhadihii ku kacsanaa xukuumadii Itobiya ee xiligaas jirtay, oo ay ka mid ahaayeen EPLF, EPRDF iyo ONLF. Waxay Jabhadu ka qayb gashay kulan ay ku lahaayeen Jabhadihii ku kacsanaa xukuumadii milatarga ee Mingestu Haile Mariam. Shirkaas waxaa laggaga hadlayey xuquuqda ay yeelandoonaan qoomiyadaha kala dhaqanka ah ee uu ka kooban yahay dalka Itobiya kolka xukunka laga rido xukuumada Milatariga ah.
Xiligaas oo ku beegnayd sanadihii 1987-88, waxaa waxaa magaca Somalida ku matalayey kulankaas Aqoonyahan ka socday Jamhuuriyada Somaliya, ahaana Hormuudkii Jaamacada Somaliya.
Kulankii 2aad ee ay isugu yimaadeen Qoomiyadaha Itobiya waxaa uu ka dhacay dalka Ingriiska magaalada London, waxaana uga qayb galay kulankaas ururka ONLF Axmed Cabdi Xuseen [Axmed Cabdi-xukun] iyo Maxamed Siraad Dolal, sanadkii July 15 -18, 1989. Axmed iyo Dolal, kolkii dambe way ka baxeen shirka.
Uruurka ONLF, waxaa uu si xoog leh uga hawl gali jiray dalalka Carabta gaar ahaana dalka Suuriya oo ay joogeen dhalinyaro badan oo ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, Jamacadana ka dhiganayey dalkaas.
Waxaa kale oo uu uruurka ONLF, wakiilo iyo taageerayaal si qarsoodiya u shaqeeya ku lahaa dalka Somaliya. Xiligaas isaga ah ururka ONLF gudo iyo dibad toona kuma lahayn siyaasad iyo ciidan midna, waxaana kaliya oo jiray guux iyo xidhiidh u dhaxeeya wakiilada.
Ururka ONLF, waxaa ay awoodiisa siyaasadeed saldhigatay dalalka reer galbeedka iyo dalka Suuriya oo uu ururku lahaa xafiisyo shaqo yar qabta.
Intaas Maanta ha inoo joogto inaga oo kobtaas ka sii dawi doona taariikhda ururka ONLF, oo ay fooda inagu soo hayso sanad guuradiisii 26aad, oo ku beegan maalinta Axamda ah August 15, 2010.
Jwxo-shiil iyo Kooxdiisu waa Dad Oodan oo ay Ilbaxnimadu ka Fog Tahay
Cabdifatax: Wadahadalka Nabada Itobiya iyo ONLF, Wuu Guulaysan